Kuwa ugu fiican emulators PSP ee Android | Androidsis
Jose Alfocea | | Emulayaashii, Ciyaaraha Android
Mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn taariikhda cayaaraha fiidiyowga wuxuu ahaa, shaki la'aan, Sony's PSP (PlayStation Potable). Qalabkan fiidiyowga ah wuxuu ku riyaaqay nolol dheer oo barwaaqo ah oo qaadatay muddo toddobo sano ah, isagoo noqday mid ka mid ah qalabka ciyaarta la qaadan karo ee ugu dheers. Waxaan horay u aragnay dhowr toddobaad kahor PSX emulator Android Haddana waa jiilka dambe.
Sony PSP ayaa leh cinwaano badan oo badan oo la ciyaaroXaqiiqdii, shirkaddu waxay ka keentay qaar ka mid ah cayaaraha PlayStation-ka PSP, si dadka isticmaala ay ugu raaxaystaan ​​meel walba. Hadda, marka lagu daro, waxaad sidoo kale ku ciyaari kartaa ciyaaraha PSP-gaaga casrigaaga ama kiniinigaaga Android. Waayo-aragnimadu maaha mid isku mid ah si kastaba ha noqotee halkan aad tagto qaar ka mid ah emulators ugu fiican PSP ee Android. Hadaad jeceshahay qunsuliyadaha hore, ha moogaanin Emulator NDS ka Nintendo in aad ku rakibi kartaa on your mobile.
AwePSP waa mid ka mid ah emulators PSP ugu fudud ee Android jira. Kaliya waa inaad bilowdaa oo aad doorataa mid ka mid ah ciyaaraha aad soo dejiso oo aad bilowdo ciyaarta. Sida ugu fudud ee. Sida kuwa badan emulators video console, AwePSP sidoo kale waxay leedahay xoogaa waxqabad iyo arrimo iswaafajin ah, in kastoo tani ay ku xirnaan doonto ciyaarta gaarka ah ee aad rabto inaad ciyaarto.
Haddii kale, AwePSP waa waxay taageertaa howlaha aasaasiga ah iyo sifooyinka sida loo badbaadiyo xaaladda cayaarahaaga, taageerada loogu talagalay kontaroolayaasha dibadda iyo inbadan. Shaki kuma jiro inay tahay ikhtiyaar wanaagsan gaar ahaan ku habboon kuwa soo galaya emulators. Maxaa intaa ka badan, taageertaa qaabab badan Faylka ay ka mid yihiin .iso, .cso, .elf, .ISO, .CSO, .ELF. ku kaydsan kaarka SD ama qalabka keydinta USB.
Kuwa runti fahmay emulators way xaqiijinayaan taas PPSSPP waa kan ugufiican emulators-ka PSP ee Android. Sababaha ayaa ah, asal ahaan, saddex, in kastoo waxaas oo dhami ay ku xirnaan doonaan wax badan awoodda iyo waxqabadka bartaada:
Ayaa ugu badan fudud isticmaalka
Waa mida bixisa mid ka fiican oo ka weyn is waafajinta leh ciyaaro
Waa midka ugu fiican waxqabadka
Sidoo kale, waa emulator bilaash ah oo la soo bixi karo; Waa run inay ku jirto xayeysiisyo aad ka saari karto adoo iibsanaya nooca pro-ka ah oo ku saabsan lix euro, qiime aan xumaan haba yaraatee marka la fiiriyo tayadiisa.
Mana iloobi karno inay bixiso cusbooneysiin joogta ah, taasoo gacan ka geysaneysa waxqabadkeeda wanaagsan. Aad ayey u wanaagsan tahay in tii hore, AwePSP, ay dad badani u haystaan ​​inuu yahay nuqul ka mid ah PPSSPP oo aan gaadhin heerkan.
Mid kale oo ka mid ah emulators PSP ugu wanaagsan ee Android waa RetroArch. Awood u leh ku dayashada boqolaal iyo boqolaal ciyaaro la qaadan karo oo PlayStation ah, RetroArch waxay isticmaashaa nidaamka Libretro oo asal ahaan asal ahaan ah ordo plugins oo u shaqeeya sidii emulators. Sidaa darteed, RetroArch waxay awood u leedahay inay u shaqeyso sidii emulator ahaan nidaam kasta oo ciyaar ah, illaa intaad haysato qalabka loo baahan yahay.
Hawlgalkeeda iyo waxqabadkeedu waa wax la aqbali karo, in kasta oo awoodda iyo waxqabadka terminalkaagu sidoo kale saamayn xoog leh yeelan doono. Sida emulators kale, waxa kale oo ay leedahay qaar ka mid ah arrimaha waafaqid taas oo ku xidhan kulamada.
Cilladaheeda ugu weyni waa in, si ka duwan PPSSPP, ay bixiso a qalooca barashada cajiibka ah maaddaama nidaamku aad u adag yahay in la isticmaalo. Xitaa sidaas oo ay tahay, waa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo aad isku dayi karto sidoo kale, waa gebi ahaanba bilaash iyo ilo furan.
Ikhtiyaar kale oo xiiso leh xulashadan emulators-ka ugu fiican PSP ee Android waa OxPSP. Iyadoo in ka badan hal milyan oo soo degsasho ah iyo qiimeyn ah 4,1 shantiiba 5 ee Dukaanka Play Store, OxPSP waxay bixisaa a cusbooneysiiyay interface-ka isticmaalaha si loogu fududaado isticmaalka iyadoo la siinayo astaamaha aasaasiga ah inta kale ee emulators sida keydinta iyo rarka horumarka cayaarahaaga, taageerada kormeerayaasha dibadda, ciyaarta tooska ah iyo awood u lahaanshaha ciyaarta ciyaaro badan iyo kuwo badan.
Guud ahaan waxay bixisaa a waxqabad wanaagsan iyo hawlgal si kastaba ha noqotee, sida inta kale, waxay sidoo kale ka kooban tahay dhibaatooyin is-waafajin gaar ah oo leh cinwaano cayiman. Sikastaba xaalku ha noqdee, waa emulator-ka aad ku soo dejisan karto a gabi ahaanba waa bilaash oo uso qaad xeebta dhamaadka usbuucan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » The emulators PSP ugu fiican ee Android
Toni Garcia Noguera sawir qaade dijo
WAAN KU XIISAYEY EMULATORS, LAKIIN Waxaan ahay NOOOL Dunidan, CIYAARAHA AAD KA HELI KARTO MAHADSANID
Jawaab Toni Garcia Noguera
Waa maxay maqaal karaahiyo ah. Nasiib darrose, qof kasta oo qoray waa jaahil, maxaa yeelay haddii uu samayn lahaa ugu yaraan cilmi-baaris, wuxuu xaqiiqsan lahaa in DHAMMAAN emulators-yadooda uu taxay ay yihiin xarkaha PPSSPP, waa inbadan oo ah 'Core of RetroArch' xitaa wuxuu leeyahay PPSSPP. Tani waa waxa aan ugu yeero qoritaanka maqaallada maxaa yeelay ma hayaan wax kale oo ay wax ka qoraan.
Jawaab ku samee José Suárez
Facebook TV: Waxaan dhawaan arki doonnaa muuqaalka asalka ah ee muuqaalka ah ee Feed News